Yenza inkumbulo yobuchwephesha yeepasile nge-CivilCAD-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Ukuvelisa imemori yobugcisa yezicwangciso nge-CivilCAD
iinkqubo ezimbalwa kakhulu ukwenza oku, ubuncinane kunye nobumhlophe eyenza KwiCACC
Into esihlala siyilindele yingxelo yeepasile, ngebhlokhi, kunye netafile yazo yezalathiso kunye nomgama, imida kunye nokusetyenziswa. Masibone ukuba ungayenza njani nayo KwiCACC, usebenzisa i-AutoCAD nangona isebenza kunye neBricscad engabizi kwaye isebenza kwimilo efanayo ye-AutoDesk:
Iinkqubo endizakuzibonisa zisetyenziswa kwimenyu yeeNgxelo, kusezantsi kwebar endikhe ndayinqunqa ukulungiselela lo msebenzi. Isisiseko ivumela imiba emithathu ebalulekileyo: Chaza izinto, zifumane sele zichaziwe kwaye zivelise iingxelo; Ngokubhekisele kwizinto, ivumela ukusebenza ngamanqaku, imida, amaqashiso kunye neebhloko (nangona le yokugqibela ingekhoyo ngokomfanekiso, kodwa luphawu lweepropathi kunye nolwandiso lwazo sisiphumo soku)
1. Bonisa imida yangaphandle
Kule nto, imenyu isetyenziswa: CivilCAD> Iingxelo> Chaza> Ukudibana
Ke into esiyenzayo kukuchukumisa imida yebhloko edibana nesitalato esikhulu, emva koko singena kwaye sibhale umda. Umqondiso osetyenzisiweyo kukuba batshintsha umbala, badlulela kumaleko abizwa ngokuba yiCVL_COLIND. Iyafana ncam nento eyenziwe yiMicrostation Geographics xa ukhetha iimpawu, nangona akukho nkcukacha apha apha.
Senza okufanayo nemida ebekwe kwezinye izitalato, kwimeko yomzekelo:
Oku kwenzayo kukudala impawu kwizinto, ezihambelana negama lomda.
Ukubona okudibanayo, kwenziwa: CivilCAD> Khangela> Ekufutshane. Sibhala umda kwaye ukuboniswa kwemephu kuya kugxila kubude bonke baloo mda, kanye njengeBentley Imephu eyenzayo ngegeolocate. Kuzo zonke ezi ndlela kukho umyalezo obhaliweyo, imeko yalo -LOCCOL.
2. Bonisa iziza kunye neebhloko
Ukubonisa ukuba zeziphi izicwangciso, zenziwa nge: I-CivilCAD> Iingxelo> Chaza> Ukulungiswa
Iphaneli iphakanyisiwe apho sikhetha khona iikhrayitheriya zokulebhelisha iqashiso: ubungakanani bokubhaliweyo, ukuba sifuna ukubhala inani lepropathi, ibhloko okanye ukusetyenziswa. Njengoko iyinkqubo yokuzenzela ngokwakho, kuya kufuneka uchaze ukuba lithini inani lokuqala.
Isalathiso esenziwa ngolu hlobo kukuba i-polygon evaliweyo ekhoyo kwicandelo leCVL_LOTIF.
Le nkqubo inezithintelo ezincinci, phakathi kwabo, ukuba awunakubeka i-01, 02, i-03 amanani ... kodwa endaweni yoko zibeke njenge-1, 2, 3, ke ukuba incwadi yemigaqo yeCadastre imisela ukuba amanani amabini kufuneka asetyenziswe, kuya kufuneka ahlelwe.
Kodwa ngokubanzi lo myalelo mkhulu, akuyomfuneko ukuba kwenziwe imida, i-lisp iwasebenzisa ngokusebenzisa umyalelo we-BPOLY, ngokucacileyo kufuneka usondeze ngokusondeleyo ukuze ungathathi ixesha elide kuba lo myalelo kwi-AutoCAD ujonga yonke indawo ebonakalayo kwaye inokuchitha ixesha ngomboniso omkhulu kakhulu. Ikwabangela iingxaki xa kukho iikona ezijikeleziweyo okanye ii-splines ekungezizo izinto ezilula zokusebenza kunye nazo ezivela kwi-CAD.
Kucacile, ukuba kule nkqubo kufuneka imephu ucoceko lwengqondoUkuba akunjalo, iya kuvelisa iindawo ezingalunganga. Kwimeko apho ipropathi iye yabhalwa ngendlela engeyiyo, ngendlela engalunganga, okanye senze uhlengahlengiso kuyo, kuphela i-polygon icinyiwe kwaye iphinda yenziwe, kuba uphawu lukwimo. Imilo nganye inxulunyaniswa nobungakanani bayo, inombolo yepropathi, ibhloko kunye nokusetyenziswa.
3. Bonisa amanqaku
Ukuze inkqubo ivelise izidibaniso zohlulwahlulo, kwenziwa: CivilCAD> Iingxelo> Chaza> Inqaku
Iphaneli ephakanyisiweyo iyasibuza ukuba sifuna ukuvelisa amanqaku ngokukodwa okanye ngebhlokhi. Singakhetha kwakhona ifomathi yenqaku, ubungakanani bokubhaliweyo kunye nenani eliqala ngalo.
kuhle nje, siya ecela ukuba Apple ufuna ukwenza amanqaku, kunye nenkqubo yenza inkqubo apho eskena zonke iindawo kwimida eyenziwe phambana, yenza kubo ingongoma, joint ibhola kwaye yenza lophawu kunye umbutho lwesithuba enjalo ukuze ubeno-ukufumana kwakhona ukhetho: CivilCAD> Iingxelo> Khangela> Indawo.
Zonke iipalenti ezivelisiweyo zigcinwa kwicala lweCVL_PUNTO kunye nezichasiselo kwiCVL_PUNTO_NUM
Ngendlela efanayo, iapile okanye okuninzi kunokufumaneka, nangona xa kusenziwa akukho lula kangako ukuba amanani aphindaphindiwe. Iya kuxhomekeka kwinkqubo ye-cadastral nomenclature, uninzi luvumela ukuphindwaphindwa kweebhloko kwimephu eyahlukileyo yesine kwaye ngokucacileyo iinombolo zepropathi ziphindaphindwe kwibhloko nganye.
3. Yenza ingxelo yobugcisa okanye echazayo.
Nazi izinto ezilungileyo. I-CivilCAD inokuvelisa iingxelo ezahlukeneyo ezinje:
Isishwankathelo seendawo: Oku kuqala kushwankathela iibhloko, kubonisa indawo enikezelwe kusetyenziso ngalunye lwepropathi nganye, emva koko isezantsi isishwankathelo sokusetyenziswa kwibloko nganye kwaye ekugqibeleni isishwankathelo sokusetyenziswa kwazo zonke iibhloko ezikhethiweyo okanye yonke imephu enxulumene nayo.
Bika iingongomaOku kuvelisa uluhlu olubandakanya iikholamu ezine: inombolo yenqaku, ulungelelwaniso lwe-X, ulungelelwaniso lukaY kunye nokuphakama.
Kwimeko Ingxelo echazayo. Ukuba sicela ibhlokhi, ingxelo ivelisiwe ebonisa igama lemephu, umhla, kwaye nganye nganye amaqashiso achazwe ngendawo ebaliweyo, ukusetyenziswa kunye nemida njengoko kubonisiwe kumfanekiso olandelayo. Bona ukuba le nkqubo yenza uhlalutyo lomda oluqhelekileyo, ke ngoko ayibali kuphela ukuba leliphi iqhagamshelo elingaphandle, idata eliyifumanayo kumda webhloko, kodwa ikwakhona ibhlokhi edibanisa ngaphakathi.
Ukuba ndifuna ukuvelisa ingxelo yohlobo Ingxelo yo bugcisaItafile ibandakanya iqashiso ngalinye: izitishi zemida, ukuthwala, umgama kunye nolungelelwaniso lwevertex. Indawo, sebenzisa kwaye oku kuyabhalwa kwipropathi nganye yeebhloko ezichaziweyo.
Kukho nenye ingxelo ludibaniso zombini, nangona indlela AutoCAD ephatha imemori Kucetyiswa ukuba usebenzise iingxelo elikhulukazi ukuba kukho iimpawu ezininzi kangangoko sinako ukwenza impazamo nciphisa memory obulalayo.
Ukuqukumbela, akukubi kwinkqubo yeCAD. Isombulula iinkqubo eziqhelekileyo kuyilo lweedolophu okanye ulawulo lwecadastral.
David TV uthi:
indlela yokwenza izikhumbuzo ezichazayo kunye nesishwankathelo seenkalo eziveliswe yi-civilcad zithathwa kwitafile kwi-autocad kwaye zingathunyelwa kwiLizwi.
I-Descmaster ilungile kodwa ihlawulwa, ndiqedile enye efanayo ngekhululekile
Karlos c uthi:
Sawubona Byron, ukuba ungathumela inkqubo okanye ulwazi kule imeyile
Byron Erick uthi:
Sawubona, ndinenkqubo yeDescmaster
UJames Linares kunye nalapho ndifumana khona le program Descmaster, ndingayifumana kuphela incwadi ebonakalayo kwi-intanethi. kodwa akukho nhlelo, ukuba unako ukundinika ulwazi malunga nokufumana oko ndiza kuba mbulelo kakhulu,
Ndingumdwebi, iimbuliso ezivela ePeru
James James uthi:
Bafanele bazame i-Descmaster, efanelekileyo ngokwaneleyo ukwenza iNkcazelo yezoBuchule esetyenziselwa ukuBhala.
Le nkqubo yenziwe ngu-Eng. Jaime Ramirez wase-El Salvador